Myanmar | Myanmar Muslims' Voice (MMV)
July 8, 2016 ENGLISH, Featured Posts, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, ပြည်တွင်းသတင်း
European Parliament condemns recent crimes and widespread discrimination against albinos in Malawi, ongoing restrictions of fundamental democratic rights in Bahrain and practices that discriminate against Myanmar’s Muslim minority, in particular the Rohingya, in three resolutions voted on Thursday. Whilst welcoming the peaceful transfer of power to Myanmar’s first non-military president since 1962 after
July 8, 2016 မွတ်စလင်သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း
မြန်မာနိုင်ငံက မူဆလင် လူနည်းစုတွေ အထူးသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိတာ၊ Bahrain နိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီ အခြေခံ ရပိုင်ခွင့်တွေကို ကန့်သတ်နေတာနဲ့ Malawi နိုင်ငံက Albino လို့ခေါ်တဲ့ အရေပြားဖြူ ရောဂါရှင်တွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပွါးနေတာတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ရှုံ့ချကြောင်း အဆိုပြုချက် (၃) ခုကို ကြာသပတေးနေ့မှာ ဥရောပ ပါလီမန် (European Parliament) မှာ မဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း) သတင်းဌာနက ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ (၂၀၁၅) နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲကနေ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၊ NLD ပါတီ တခဲနက် အနိုင်ရခဲ့ပြီး (၁၉၆၂) ခုနှစ်က စလို့ စစ်တပ်က မဟုတ်တဲ့ သမ္မတ ပထမဆုံးအကြိမ်
June 21, 2016 ENGLISH, မွတ်စလင်သတင်း, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်
Issuinganew report on the situation of minorities in Myanmar, the United Nations High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra’ad Al Hussein has urged the Government to take concrete steps to end the “systemic discrimination” and ongoing human rights violations against minority communities, particularly the Rohingya Muslims in Rakhine state. The report